Garaad Ciid ?Qurba-joogta Puntland waa in ay deg deg u muujiyaan doorkooda masiibada? (Dhegeyso) – Radio Daljir
Nofeembar 13, 2013 3:21 b 0
Garoowe, November 13, 2013 – Guud ahaan Puntland waxaa ka socda baaqyo iyo gurmadyo is dhinac socda, kadib markii ay roobab qabow wata ka da?een deeganada barriga iyo nugaasha ee Puntland, waxaa dhintay dad fara badan roobabka owgood.
Isimada Puntland ayaa si deg deg ah ugu baaqay in loo gurmado dadka ku waxyeeloobay dhibaatada ka dhalatay roobab dabalyo wata oo ka da?ay deegaano badan oo ku yaala xeebaha Bari ee Puntland.
Afhayeenka Isimada Puntland Garaad Cabdulaahi Cali ciid oo la hadlay idaacada Daljir ayaa ugu baaqay qurba-joogta iyo hay?adaha samafalka iyo bulshada kale ee Soomaalida in ay kaalin wayn ku yeeshaan gargaarka loo fidinayo dadka dhibaataysan.
?Gargaar deg deg ah iyo gurmadyo waa in laga helaa qurba-joogta reer Puntland.? Ayuu yiri Garaad Cabdulaahi oo ka hadlayey saamaynta ay reebtay duufaanta dhulka kulul oo ku dhufatay xeebaha gobolka Nugaal iyo kuwa Bari.
Isimada Puntland waxay uga mahad-celiyeen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya yabooha dhaqaale iyo gurmadka ay u fidinayso dadka reer Puntland, sidoo kale Afhayeenka isimada Puntland Garaad Cabdulaahi Cali waxaa uu u mahad-celiyey Soomaaliland.
?Arrintan maaha mid siyaasaddeed masiibo ayaa dhacday, wax Soomaalidu caan ku tahay in ay isu-gurmadaan, xilliyadan ay arrintan o kale jirto.? Ayuu yiri ugu dambayntii Afhayeenka isimada Puntland Garaad Cabdulaahi oo la hadlayey idaacada Radio Daljir
Dhegeyso: Afhayeen Garaad Cabdulaahi Cali Ciid oo ku hadlaya afka Isimada Puntland
Booliska Kenya oo saaka xaafada Islii ee Nairobi ku dilay labba ruux oo lagu sheegay Argagixiso